Soo -saaraha iyo Warshadda Mashiinka Xirmooyinka Tube ee ugu Fiican Teneng
Kala -goynta & Laynka Laynka Dheer
Roll Qabow U samaynta Mill
Automatic Steel tuuboyinka Bundling & xirxirida Machine
ERW355 Milling mashiinka arkay
CS127 axdi qarameedka qabow arkay mashiinka
ZJ2000 Khadka Kala -goynta
Mashiinka kala -goynta ee birta ...
Mashiinka Tube Steel
Mashiinka waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro oo lagu xiro badeecada la dhammeeyay khadka wax -soo -saarka beebka. Iyadoo aan la helin hawl -gacmeed, mashiinku si otomaatig ah ayuu u shaqeeyaa, kaas oo aad u wanaajiyay wax -soo -saarka wax -soo -saarka. Waxay tirtiraysaa dhawaqa garaaca, dhaawaca, iyo badbaadada khatarta qarsoon, waxayna hagaajinaysaa tayada badeecada waxayna hoos u dhigaysaa qiimaha wax soo saarka.
Si loo daboolo baahida gudaha ee otomaatiga ee khadka wax -soo -saarka beebka, waxaan nuugnaa barta adag ee qalabka dibedda waxaanna u horumarinnaa hal -abuur. Mashiinku wuxuu leeyahay astaamaha tikniyoolajiyadda horumarsan, isku hallayn aamin ah oo sareysa, qaab -dhismeed isku dhafan oo macquul ah, geedi socod baaluq ah, iyo dayactirka hawlgalka habboon. Marka la barbardhigo mashiinka dibedda, wax -qabadka ilaa saamiga mashiinkayaga ayaa sarreeya.
Warshadaha lagu dabaqi karo:
Dukaamada Agabka Dhismaha, Warshadda Warshadaynta
Adeegga Dammaanadda Kadib:
Ma jiro adeeg
Goobta Adeegga Deegaanka:
Masar, Maraykanka, Japan, Australia
Fiidiyowga kormeerka socda:
Warbixinta Imtixaanka Makiinadaha:
Alaabta caadiga ah
Dammaanadda qaybaha muhiimka ah:
Qaybaha Muhiimka ah:
Khadka Soo -saarka Biibiilaha
sidii loo baahdo
Awoodda Wax -soo -saarka:
Adeegga iibka kadib ayaa la bixiyay:
Taageero onlayn ah, Injineero diyaar u ah mashiinnada adeegga ee dibedda
Qodobbada Iibinta Muhiimka ah:
Si Fudud Loo Shaqeeyo
dhagax tuubada erw
Wax ceeriin ah:
Gariiradda birta kaarboon
Tuubo wareegsan, tuubo labajibbaaran & beeb leydi. biibiile ovel,
Miinshaar meereedka wareegga ah
Faa'iidooyinkayagu waxay yareeyaan qiimayaasha, kooxda iibinta firfircoon, QC khaas ah, warshado adag, adeegyo tayo sare leh iyo badeecado loogu talagalay Mashiinka Ballaarinta Dhammaadka Tayada Sare ee Shiinaha/Biibiilaha ”. Waxaan raaci doonnaa fikraddan oo waxaan ku guuleysan doonnaa raalli ahaansho aad u badan oo macaamiisha ah.
Mashiinka Tayada Sare ee Sare, Ballaarinta, Sanadaha yar gudahood, waxaan si daacadnimo ah ugu adeegnaa macaamiisheena sida Tayada Koowaad, Prime Integrity, Delivery Timely, taas oo nagu kasbatay sumcad aad u wanaagsan iyo faylalka daryeelka macmiilka ee cajiibka ah. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno Hadda!
Ururku wuxuu ku sii socdaa fikradda nidaamka “maaraynta sayniska, tayo sare iyo mudnaanta hufnaanta, iibsadaha ugu sarreeya 8 Sano -dhoofiyaha Shiinaha Birta Xaashida Gawaarida ee Mashiinka iyo Mashiinka Mashiinka Tube Mill, Ku soo dhowow inaad hubaal ka mid noqoto annaga oo dhinac iska ah si ururkiinnu u fududaado . Waxaan si caadi ah u ahayn lamaanahaaga ugu weyn marka aad rabto inaad yeelato ganacsi yar oo kuu gaar ah.
8-Sano-dhoofiyaha Shiinaha miller, lathe milling, Hubso inaad dareento lacag la'aan si aad noogu soo dirto faahfaahintaada waxaanan kuugu jawaabi doonnaa si dhakhso ah. Waxaan helnay koox injineer khibrad leh oo u adeegta baahi kasta oo dhammaystiran. Muunado bilaash ah ayaa laga yaabaa in adiga shakhsi ahaan loo soo diro si aad u ogaato xaqiiqooyin aad u badan. Si aad u buuxiso rabitaankaaga, fadlan dhab ahaantii waxaad dareentaa kharash la'aan inaad nala soo xiriirto. Waxaad noo soo diri kartaa emayl oo si toos ah noo soo wac. Intaa waxaa sii dheer, waxaan soo dhaweynaynaa booqashooyinka warshadeena ka socda adduunka oo dhan si aad si fiican loogu aqoonsado shirkadeena. iyo badeecad. Ganacsiga aan la leenahay baayacmushtarrada dalal dhowr ah, waxaan inta badan u hoggaansannaa mabda'a sinnaanta iyo ka faa'iideysiga labada dhinac. Waa rajadayada suuqa, dadaal wada jir ah, ganacsi iyo saaxiibtinimo labadaba si aan u helno faa'idada labada dhinac. Waxaan rajeyneynaa inaan helno weydiimahaaga.
Shijiazhuang Teneng Korontada & Qalabka Farsamada Co., Ltd waa soo -saaraha xirfadda leh ee line-soo-saarka biibiile bir alxanka, khad duudduuban la xirrira laynka, line-jeexidda, line-to-dhererka iyo la xiriira qalab kaabayaal ah. Shirkadda Teneng waa shirkad casri ah oo karti u leh cilmi -baarista iyohorumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Teneng waa xubin golaha ah ee Ururka Samaynta Roll China,xubin madaxweyne ka ah Ururka Ganacsiga ee Tube Hebei Steel.Mashiinnada Teneng waa qalabka wax -soo -saarka tuubada ugu waxtarka badan ee laga heli karo adduunka.Dalka Shiinaha, adeegsadayaasha caanka ah waa Hebei Jingye Group, SANY Group, Warshadaha Dhismaha Shiinaha Shirkadda, Chongqing Changzheng Heavy Industry Co., Ltd iwm.
Baakadaha & Shixnadaha
Hore: Sargaal Tube Steel
Xiga: LW600 Roll Qabow U samaynta Machine dhagaxshiidka
Mashiinka xirxirida biibiilaha birta oo otomaatig ah
mashiinka xirxirida beebka
Sargaal Tube Steel
Xidhmada biibiile bir otomaatig ah oo buuxa & packi ...
Mashiinka xirxirida biibiile bir otomaatig ah oo buuxa
Shijiazhuang Teneng E & M Qalabka Co., Ltd.